Wasiir Warfaafinta Soomaaliya Oo Baarlamanku Wax Ka Weydiiyeen Shirkadda FAVORI LLC * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Warfaafinta Soomaaliya Oo Baarlamanku Wax Ka Weydiiyeen Shirkadda FAVORI LLC
Muqdisho: Wasiirka Warfaafinta, boostada iyo Is-gaarsiinta, boostada iyo gaadiidka Soomaaliya, C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa maanta xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya uga jawaabay su’aalo laga weydiiyay heshiis ay xukuumaddu la gashay shirkad Turkish-ka ah ee lagu magacaabo FAVORI LLC oo dhawaan la wareegtay maamulka garoonka Muqdisho.
Wasiir Ciilmooge ayaa xildhibaannada u akhriyay heshiiska qaybtiisii 2-aad, isagoo sheegay in heshiiskan uu yahay mid lagu horumariyo adeegyada gaadiidka dalka sida garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya xaq u leedahay inay heshiis nuucaan ah la gasho shirkadaha wax ka qaban kar horumarka dalka.
“Wasaaraddu awood iyo sharciba waxay u leedahay inay ogolaato hagaajinta, dib u dhiska iyo horumarinta hannaanka gaadiidka Soomaaliya oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle” ayuu yiri wasiir Ciilmooge.
“Shirkaddana waa mid ku xeel-dheer arrimo badan oo isugu jira dhismayaasha nabadgalyada ee gaadiidka iyo maamulka,” ayuu sidoo kale yiri wasiirka oo sharraxayay heshiiska ay la galeen shirkadda FAVORI.
Wasiir Ciilmooge ayaa xusay in shirkadda FAVOVI awood u leedahay inay fuliso heshiiska ay la gashay dowladda Soomaaliya, wuxuuna xusay in ujeeddada heshiiskan uu yahay sidii loo hormari lahaa garoonka Muqdisho.
Xildhibaanno ka hadlay kulanka ayaa qaarkood soo dhaweeyey heshiiska xukuumadda Soomaaliya la gashay shirkadda FAVORI, halka qaar kale codsadeen in la caddeeyo qaar ka mid ah qodobada.
Wasiir Ciilmooge ayaa isbarbardhig ku sameeyey shirkaddii hore ee SKA ee laga wareejiyey maamulka garoonka Muqdisho, iyo shirkadda FAVORI oo hadda maamusha garoonkaq Muqdisho.
“Haddaan tusaale bixiyo SKA waxay ku billowday daqliga ay dowladda kusoo wareejinayso 35%, waxaana gaarsiinnay 40%. Balse shirkaddan cusub waxay ku billaabaysaa 45%, waana caddanay saddexda sano ee soo socota halka la gaarsiin karo. Isagoo xusay in dhaqaalaha ku baxaya uu gaarayo 18-milyan oo doollar.”
Ugu dambeyn, guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Somalia, Jeylaani Nuur Iikar oo soo xiray fadhiga ayaa sheegay inay is-qoreen 4 xidhibaan ayna su’aalahooda jeediyeen 12-mudane, kuwa dhimanna ay berri oo Axad ah wasiirka weydiin doonaan su’aalahooda.
Booliska Soomaaliya Oo Albaabada U Laabay Radio Shabeelle Kadib Markii Uu Guuri Waayey Gurri Dowladdu Leedahay
Shaqaalaha Radio Shabeelle Oo Boolisku Xoog Uga Saaray Dhismaha Idaacadda